Chii Chinonzi Malware - Semalt Practice
Malware inozivikanwawo seyakashata software. Zvinoreva zvinhu zvakasiyana-siyana zvinokuvadza uye zvinotyisa zvinowanzokuvadza kombiyuta yako chiparadzi uye kuparadzira mavairasi, Trojan mahara, minye, adware uye spyware kumakombiyuta ako.
Oliver King, the Semalt Mutungamiri Akabudirira Mutengi, anotaura kuti hazvingakanganisi kutaura kuti malware inovhiringidza kana kushungurudza makombiyuta ako uye inokubira dunhu rako pachako. Inogonawo kugadzirisa kuwanikwa kwako kune imwe yako pasina ruzivo rwako. Kune marudzi akasiyana e-malware, akadai se spyware, phishing, rootkits, browser browser, uye ransomware.
Ndeipi iyo malware inobva kupi?
Kazhinji kacho, malware uye virusi zvinopinda maikiruta epakombiyuta paunotanga zvidzidzo zvisinganzwisisi zvemailandi kana kuvhara pane mahwendefa ep-up munhamba huru - minha internet nao funciona por causa do dns. Vanowedzerawo mazano ako kuburikidza newebsite, mitambo, nzvimbo dzekutsvaga paIndaneti, mafaira e-audio uye emimhanzi, software, toolbars, kusununguka kusingabhadhara, uye chero chipi zvacho chaunotora kubva kune mamwe maziviki asingazivikanwi, izvo hazvina kudzivirirwa ne anti-virus uye anti-malware.)
Nzira yekuziva sei malware
Kana iwe uchigara uchitsvaga paIndaneti uye ukashandisa mawebhusayithi akasiyana-siyana kana kuti shandisa nzvimbo yako pachako, unogona kunge uri chirwere chemavirusi kana macheji. Kakombiyuta inononoka chiratidzo chokuti makombiyuta ako anotapukirwa nemavirusi uye malware. Kana iwe ukaona mahwindo ekuputika, zvinonyadzisa uye kuputika kazhinji, iwe ungangodaro uri munhu akabatwa nemarware. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvakakosha kuti iwe ushandise malware scanners uye uvaendese pose pauri kushandisa internet..Zvimwe zvinorwisa-malware uye antivirus software nemapurogiramu zvinowanika paIndaneti iyo inotarisira kukanganisa kakombiyuta yako uye kuvharira kuwanikwa kwako.
Nzira yekubvisa malware
Imwe yenzira dzakanakisisa dzokubvisa zvirwere uye malware ndeyokushandisa zvigadzirwa zvechokwadi zvekushandisa malware uye antivirus software. Nhamba huru yezvasarudzo inowanika paIndaneti. Paunenge uchisarudza software, unofanirwa kuchenjerera uye uone maitiro ayo. Rega ini pano ndikuudze kuti hazvisi zvose software nezvirongwa zvakanaka kuti uende nazvo. Vakawanda vekusununguka kwe-malware nemavhidhiyo evhidhiyo vakaipa kwekombiyuta yenyu. Zviri nani kubhadhara chimwe chinhu uye kuwana bhadhiro yakabhadharwa kuti uwedzere mikana yako yekudzivirirwa paIndaneti. Avast Free Antivirus uye anti-malware zvishandiso zvakanaka kuti aende nazvo uye anogona kuiswa kubva kune dzimwe nzvimbo dzepamutemo mumaminitsi.
Shandisa anti-malware kuti uzvidzivirire
Hapana chinhu chiri nani kupfuura kuziva, kubvisa nekudzivirira malware pane kushandisa sirusiki uye anti-malware zvishandiso. Software yakanakisisa uye yakavimbika ndeye Avast. Inotaridzika yakarongedzwa nepamusoro nekwenyanzvi uye nyanzvi yezvigadzirwa. Ichi chigadzirwa chakakonzerwa nemamiriyoni evanhu munyika yose, uye kushanda kwayo kwakanakisisa. Zvimwe zvezvinyorwa zvayo zvakakurumbira ndezvivimbiso zvisingabviriki zvepa password, imba yekuchengetedzwa kwenzvimbo, tsvina yakachena uye yakachena uye zvinhu zvose izvi zvinouya pasina.
Unogonawo kushandisa anti-malware scanners yeimwe makambani seMicrosoft anowanikwa nenhamba huru. Dzinodzivirira zvirongwa zvako zvekushandisa uye kuchengetedza mavairasi nehonye kure apo iwe uri kushandisa internet. Anti-malware zvirongwa zvinogona kurwisana nemarware uye mavairasi nekudzivirira kune izvo zvinhu. Vanofanira kumhanya zuva nezuva; iwe unofanirwa kuedza kuisa shanduro dzakashandurwa zve software kuitira kuti kuchengeteka kwako paIndaneti kuve nechokwadi.